Regulator Greenlights New Insurance Products | Myanmar Business Today
Home Investment & Finance Regulator Greenlights New Insurance Products
The Insurance Business Regulatory Board under the Ministry of Planning, Finance and Industry announced in the first week of March its decision to approvearaft of new insurance products.
Insurers need approval from the Board before they can market new insurance products or redesign existing ones. New products must be in the scope of life or general insurance, according to an official from the Board.
Insurance companies can propose one insurance product atatime; they must secure approval for their proposed product before proceeding with another proposal. There are now 14 insurance products in the market provided by 11 local firms.
Myanmar has opened up the insurance industry to private sector players and seven of the 11 local insurance companies are licensed to operate life and general insurance services and four are licensed to offer life insurance.
The regulator approved five foreign-owned companies and six joint-venture firms in April last year. These companies have investedatotal of $127 million plus K 67 billion in the insurance service industry, data from the Board show.
အာမခံလုပ်ငန်းပိုမိုအားကောင်းလာစေ ရန် အာမခံအမျိုးအစားအသစ်များထုတ် ရောင်းချနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ညွှန်ကြားချက် တစ်ရပ်ကို စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှု ဝန်ကြီးဌာန၊ အာမခံလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့သည် မတ်လပထမအပတ်က ထုတ်ပြန် လိုက်သည်။
အာမခံကုမ္ပဏီများသည် အာမခံအမျိုး အစားသစ်များရောင်းချရာတွင်လည်း ကောင်း၊ အမျိုးအစားများပြောင်းလဲလိုလျှင် လည်းကောင်း အာမခံလုပ်ငန်းကြီးကြပ် ရေးအဖွဲ့ထံခွင့်ပြုချက်တောင်းခံရမည်ဟု ဖော်ပြထားပြီး အာမခံကုမ္ပဏီများ အနေဖြင့် မူလခွင့်ပြုထားသောအသက်အာမခံနှင့် အ ထွေထွေအာမခံလုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ် သောအမျိုးအစားသစ်များကိုသာ ရောင်းချ နိုင်မည်ဟု စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှု ဝန်ကြီးဌာန၊ ငွေရေးကြေးရေး ကြီးကြပ်စစ် ဆေးရေးဦးစီး ဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဆိုသည်။
ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် တစ်ကြိမ်လျှင် အာမခံအမျိုးအစားအသစ်တစ်ခုကိုသာ တင်ပြခွင့်ရှိပြီး ယင်းအမျိုးအစား အတွက် ခွင့်ပြုပြီးမှသာ နောက်တစ်ခုကို ထပ်မံ လျှောက်ထားနိုင်မည်ဟု သိရသည်။ ဈေး ကွက်တွင် ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေသော ပြည် တွင်းအာမခံ ကုမ္ပဏီ(၁၁)ခုရှိပြီး အာမခံ အမျိုးအစား(၁၄)မျိုးကို ရောင်းချခွင့်ပြု ထားသည်။
ပြည်တွင်းရှိအာမခံကုမ္ပဏီများကို ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်မှစတင်၍ အာမခံလုပ်ငန်းများကို စတင် လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးခဲ့ပြီး ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိက အာမခံကုမ္ပဏီ ၁၁ ခု အနက် (၇)ခုသည် အသက်အာမခံနှင့်အထွေထွေအာမခံ နှစ် မျိုးစလုံး လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိထားပြီး ကျန်လေး ခုသည် အသက်အာမခံလုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိထား သည်။
နိုင်ငံခြားအာမခံကုမ္ပဏီ(၅)ခုနှင့် ပြည် တွင်းပြည်ပဖက်စပ်အာမခံကုမ္ပဏီ ၆ ခုကို ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်ဧပြီလ၌ စတင် လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေး ခဲ့သည်။
အဆိုပါ နိုင်ငံခြားအသက်အာမခံ ကုမ္ပဏီ(၅) ခုနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပ ဖက်စပ် အာမခံကုမ္ပဏီခြောက်ခု၏ မတည်ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုပမာဏမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၂၇) သန်းကျော်အပါအဝင်ကျပ်(၆၇)ဘီလီယံကျော်ရှိကြောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နှင့်ကုမ္ပဏီများ ဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုဦးစီး ဌာန မှသိရသည်။
Previous articleMinistry Launches Swiss Challenge for Housing Megaproject
Next articleMTSH Wins Kyogone Housing Project